Kaararka dhalashada oo bilaash ah si aad u soo dejiso: mareegaha ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
Kaararka dhalashada bilaashka ah si aad u soo dejiso
Nerea Morcillo | | General, Dhiirrigelinta
Kaararka salaanta waxay had iyo jeer ku jireen nolol maalmeedkeena. U hambalyaynta qof waxay noqotay fal bulsho maalinle ah, waxa dad badani aanay garanayn waxa ka dambeeya kaadhka dhalashada.
Taasi waa sababta, qoraalkan, waxaan u dabaaldegeynaa, maadaama aynaan kaliya ku tusin qaar ka mid ah sifooyinka kaararkan oo aan dhammaanteen naqaanno oo aan helnay waqti qaar, laakiin sidoo kale, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican. kaadhadhka dhalashada ee ma haysatid cudurdaar marka ay timaado u hambalyeynta qof aad jeceshahay.
Marka la soo koobo, waxaanu soo jeedin doonaa qaar ka mid ah boggaga ugu fiican ee aad ka soo dejisan karto.
Taas oo kaliya maaha, qaar ka mid ah barnaamijyada aad ku qaabayn karto sida aad jeceshahay.
1 Kaararka maalinta dhalashada: maxay yihiin?
1.1 noocyada kaararka
1.1.4 Cabbir weyn
1.2 Tiro yar oo taariikh ah
2 Barnaamijyada ugu fiican
2.2 Kaararka Ganacsiga
3 Codsiyada kale ee xiisaha
3.2 hadiyad asalka ah
Kaararka maalinta dhalashada: maxay yihiin?
dhalashada ama kaararka salaanta, waxaa lagu qeexaa sida nooc ka mid ah kaararka halkaas oo fariintu ay tahay jilayaasha ugu weynWaayo, waxaa ka buuxa hadallo wanaagsan, maxaa yeelay, farriintu waxay ka dhigan tahay farxad. Caadi ahaan waa kaararka dabeecadda bulsheed maadaama inta badan la isticmaalo waqtiyo gaar ah sanadka ama xafladaha qaarkood, tusaale ahaan, waxaan ka heli karnaa kaararka qof loogu hambalyeeyo dhalashadiisa ama si fudud sababtoo ah waa Christmas. Waxaa jira kuwa kale oo uu ugu hambalyeeyo shaqada ama inuu gaaray xoogaa guul ah, ha noqoto mid isboorti ama dabeecad shakhsi ahaaneed.
Caadiyan, kaadhadhkan waxaa sida caadiga ah la socda baqshad tilmaamaysa magaca qofka loogu talagalay.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo kaararka dhalashada, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa leh sifooyin ka dhigaya kuwo badan ama ka yar hal-abuurnimo, laakiin waxa muhiimka ah ayaa ah in dhammaantood ay ilaaliyaan nuxurka.
Kaararka salaanta muusiga waxaa lagu gartaa, sida magacooda ka muuqata, oo ay ku jiraan muusiga gudaha. Waxay ka kooban yihiin cod-bixiye yar oo ay la socdaan baytari iyo wareegyo la socda marka kaadhka la furayo. Marka uu qofku furo kaarka, waa la shidaa, waxaana la maqlayaa laxan macaan. oo firfircoon oo la socota fariinta ay sido gudaha.
Waxay yihiin kuwo aad u caan ah tan iyo markii la isticmaalo wakhtiga Kirismaska. Intaa waxaa dheer, badanaa waxay leeyihiin cabbir aan aad u weyneyn, tusaale ahaan, inta badan waxaa loogu talagalay cabbir aan ka badnayn DIN A5. Waxay yihiin kuwo aad u hal abuur leh waxayna raadiyaan dhinaca ugu xasaasisan ee dadka iyada oo loo marayo muusikada.
3D kaadhadhka salaanta Waxaa lagu gartaa inay ku jiraan taxane ah gargaar iyo qaabab u taagan si ay u bixiyaan muuqaal saddex-cabbir ah oo dheeraad ah. Waxay yihiin kaarar aad u hal abuur leh oo madadaalo leh, halkaasoo shaqada ugu weyni ay ku jirto animation.
Sida kaararka jireed sidoo kale loo qaabeeyey, waxaan sidoo kale ka heli karnaa internetka. Intaa waxa dheer, dad aad u tiro badan ayaa kaadhadhka salaanta ee kala duwan ku soo diraya boostada ama codsiyada fariimaha. Waxay yihiin kuwo aad u raaxo leh oo fudud. Intaa waxaa dheer, aad ayay u degdeg badan yihiin maadaama gujis aad isla markiiba u diri karto oo aanad qorin fariinta.
Waxaan u barannay inaan aragno kaararka dhalashada ee cabbirka caadiga ah oo aan aad u weyneyn oo aan aad u yareyn. Laakiin shaki la'aan, waxaa sidoo kale jira kaararka salaanta weyn. Kaararkan waxaa lagu gartaa inay leeyihiin cabbir aad u weyn marka loo eego cabbirkooda.
Si fiican, Mid kasta oo kuwan kaamil ah ayaa cabbiri kara isla DIN A3, xitaa mararka qaarkood DIN A1 ayaa la arkay. Waxay yihiin kaadhadhka ugu fiican haddii aad rabto inaad qofkaas si weyn ula yaabto, oo marnaba si fiican u odhan. Dhiirran oo bilow isticmaalkooda.
Rumayso ama ha rumaysan, kaadhadhka salaanta ama kaadhadhka boostada waxa ka dambeeya sheeko aad u xiiso badan. Si loo ogaado, waxaa lagama maarmaan ah in aan u safro 1869. Adeegga boostada ee caanka ah ee Austro-Hungary ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee naqshadeeya buug-yaraha daabacan ee noocaan ah.
Isbaanishka, kaarka boostada ayaa bilaabay inuu helo muhiimada sanadka 1873, waxay ahaayeen kaararka boostada oo gebi ahaanba ka maqan sawirada, kaliya waxay haysteen meel loogu talagalay shaambada caanka ah iyo sanduuq yar oo sawir ah. Waxay ahaayeen kuwo aad uga yar kuwa maanta aan naqaano ilaa waagaas waxay noqdeen xubno muhiim ah iyo siyaabaha fariimaha la isugu gudbiyo.
Waxaa laga soo xigtey: Ballaarin
Haddii aan dooranno inta u dhaxaysa doorashooyin kale oo badan, shaki la'aan, midka ugu weyn wuxuu noqon lahaa Canva. Canva waa nooc ka mid ah tifaftirayaasha khadka ah halkaas oo aad ku qaabayn karto dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha: jadwalka, kaadhadhka, boodhadhka, boodhadhka, iwm.. Waxa ay haysaa baakidh sawirro ah iyo walxo garaafyo kuwaas oo kaa caawin kara qaabaynta kaadhka boostada ama kaarka dhalashada ee aad waligaa aragtay.
Sidoo kale, mahadsanid qaab-dhismeedyadeeda, waxaad u qaban kartaa shaqada si ka dhaqso badan oo ka sahlan sidii caadiga ahayd, maadaama qaarkood ay la yimaadaan farta la doortay iyo midabada.
Codsigan, waxaad samayn kartaa ama samayn kartaa kaadhka dhalashada adiga oo aan wax lacag ah bixin. Codsigu gabi ahaanba waa bilaash wuxuuna leeyahay qalabyo iyo hawlo kala duwan oo lagu naqshadeeyo. Sidoo kale, iyada oo ay ugu mahadcelinayso kala duwanaanshaha ay ku bixiso is-dhexgalka, waxaad samayn kartaa kaararka dhammaan qaababka iyo cabbirrada suurtagalka ah.
Waxa kale oo ay leedahay dhowr baakadood oo waaweyn oo far, sawirro, midabyo ah iyo xitaa filtarrada xiisaha leh kuwaas oo la yaabi doona qofka qaata kaarkaaga. Shaki la'aan waa qalabka iyo codsiga ugu fiican si qofkaas looga dhigo mid gaar kuu ah oo aad ku faraxsan tahay oo aad la yaabto naqshadaada.
Kaadhka Cam-ka ma awoodid in aad naqshadayso kaadhadhka balse taa beddelkeeda, waxa aad awoodi doontaa in aad sawirto. Waa barnaamijka ugu fiican haddii waxa aad raadineyso ay tahay in aad iskaan ka sameyso naqshadahaaga oo aad u isticmaasho ujeedooyin kale. Waxay leedahay beta ama nooca bilaashka ah halkaasoo ay kuu ogolaaneyso inaad ku kaydiso wadar ahaan 250 kaarar, taas oo ku habboon maadaama ay kuu ogolaaneyso inaad kaydiso qayb weyn oo ka mid ah kaararka aad naqshadeysay.
Sidoo kale, sifo ahaan, Waxa kale oo ay bixisaa suurtogalnimada wax ku wadaaga Bluetooth ama la wadaag iimaylka, qaar ka mid ah nashqadaha aad samayso mar hore la sawiray. Codsiga ugu fiican haddii aad rabto inaad siiso taabasho ka duwan.
Xigasho: Review Professional
Haddii waxa aad raadinayso ay tahay inaad abuurto kaadh xirfad leh oo hal abuur leh, oo leh InDesign waxaad haysataa xalka. Waa aaladda ugu habboon ee lagu dejin karo laguna naqshadayn karo qaybaha dabeecadda tifaftirka badan leh.Nashqado badan oo aqoonsi ka shaqeeya ayaa barnaamijkan u isticmaala kaararka ganacsiga ee shirkad gaar ah.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay xarfo kala duwan, si aadan u dhicin ama u gaabin naqshadeyntaada. Waxa kale oo ay bixisaa qaabab qoraal oo kala duwan iyo xulashooyinka cutubka halkaas oo aad si fiican u naqshadayn karto iyo iyadoo si sax ah loo qaybiyay qoraallada. Dhab ahaantii u tag Adobe oo isku day xulashooyinka kala duwan ee ay bixiso.
Haddii aan horay uga hadalnay qaabka, hadda waxaan dooneynaa inaan ka hadalno sameynta sawiradaada ama qaybaha garaafyada ee kaararkaaga. Illustrator, Ma samayn kartid oo kaliya wax kasta oo noqon doona bannaanka kaarkaaga, laakiin sidoo kale ma samayn kartid calaamadaha yaryar ama vectors aad u baahan tahay. Waxa ugu fiican ee ku saabsan app-kan ayaa ah in uu leeyahay qaabab dhoofin iyo daabacaad oo kala duwan, oo ay weheliso sidoo kale waxay la shaqeysaa labada midab ee muhiimka ah, RGB iyo CMYK.
Shaki la'aan waa codsiga aad u baahan tahay si aad u keento kaararkaaga iyo naqshadahaaga nolosha. Intaa waxaa dheer, waxaad isku dayi kartaa oo aad ku waayi kartaa naftaada xirmada burushyada.
Codsiyada kale ee xiisaha
Pinterest waa qalabka xiddigaha loogu talagalay kuwa u baahan dhiirigelin. Waxay leedahay in ka badan 5000 oo sawir oo noocyo iyo fasallo kala duwan ah. Kaliya waa inaad ereyga ku darto mashiinka raadinta waxayna ku tusi doontaa sawirro aan dhammaad lahayn oo waxaad raadisay.
Way ku habboon tahay haddii aad ku dhegtay habka naqshadaynta. Sidaa darteed, waxay haysataa kumanyaal iyo kumanaan sawiro kaa caawin kara naqshadaynta kaadhkaaga salaanta. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay casharro yaryar oo aad raaci karto oo aad ku tijaabin karto naqshadahaaga.
hadiyad asalka ah
Hadiyada Asalka ah kaliya ma abuuri kartid hadiyado shaqsiyeed laakiin sidoo kale mareegahaan sidoo kale wuxuu leeyahay suurtagalnimada abuurista kaararka boostada oo leh sawirro shaqsiyeed. Waa aaladda ugu fiican ee lala yaabi karo oo lagu farxo maadaama aadan kaliya naqshadeyn karin kaararka boostada ama kaararka laakiin sidoo kale leh waxyaabo kale oo xiiso leh wakhti kasta oo gaar ah sanadka: Christmas, Maalinta Jacaylka, Maalmaha dhalashada, iwm.
Kaliya waa inaad ka dhex raadisaa tabskeeda nooca badeecada aad raadineyso waxayna sameyneysaa baaritaan degdeg ah waxayna ku tusineysaa qaar ka mid ah xulashooyinka la midka ah ama la midka ah. Hubaal waa kaamil.
Marka la soo koobo, codsiyadan taxanaha ah iyo shabakadaha internetka ee aan kuu soo jeedinay inaadan mar dambe cudur daar u haysan inaadan adigu naqshadayn. Kaararka maalinta dhalashada, sida kor ku xusan, qayb ayay naga ahaayeen oo ilaa maanta waa qayb innaga ah.
Horumarinta tignoolajiyada, hadda waxaa suurtagal ah in lagu naqshadeeyo internetka, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa horeyba ula yimid qaabab badan oo ka mid ah shaqada fikradda. Hadda waxa hadhay waa in aad gudaha u soo gasho oo aad tijaabiso qaar ka mid ah barnaamijyada aan soo sheegnay oo aad noqoto naqshadeeyaha kaadhka salaan ee ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Kaararka dhalashada bilaashka ah si aad u soo dejiso
Sida loo sameeyo triptych